किन राखिन्छ ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा ? | Nepal Ghatana
किन राखिन्छ ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा ?
प्रकाशित : २१ आश्विन २०७८, बिहीबार ०७:०२
प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन दसैं आज बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । घटस्थापनाको साइत बिहान ११ बजेर ४६ मिनेटमा रहेको छ । आज चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११:४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्ने छ ।
संस्कृत भाषमा यव भनेको जौ हो । वेदको मन्त्रमा भने यवलाई ज्यव भनेर उच्चारण गरिन्छ । यसरी ज्यव उमार्नुलई नै जमरा भनिएको हो ।
जौँ नै किन उमार्ने रु धान, गौँ किन नउमार्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मत छ । विशेष गरी अन्नमा पनि जौँलाई सबैभन्दा पुरानो अन्नको रुपमा लिइन्छ र जौँ भगवानको प्रिय वस्तुसमेत भएकाले यसको प्रयोग गरिएको हो ।
शास्त्रमा पनि जौँको निकै महत्व रहेको छ । जौँलाई एकदमै पौष्टिक आहारको रुपमा लिइन्छ । घिउमा मिसाएको जौले हवन गर्दा वातावरणमा रहेको विषालु पदार्थ नष्ट हुनुको साथै पानी पार्नसमेत यसले मद्दत गर्दछ । यसलाई पछिल्लो समय वैज्ञानिकले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
दसैं मनाउने विषयमा कुनै शास्त्र पुराणमा उल्लेख नभएपनि नवरात्रको नौ दिन देविको पूजा आराधना गरि दशौं दिन नौ दिनसम्म पूजा गरेको देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने भएकाले नै यसलाई दसैंका रुपमा मनाइँदै आएको हो ।
आसुरी प्रवृत्तिको प्रतीकका रुपमा रहेका चण्ड, मुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ, रक्तबीज लगायतका राक्षसको गर्न दुर्गाले लिएका नौ रुपको यस अवसरमा विशेष पूजा आराधना हुन्छ । नवरात्रभर दुर्गा सप्तशती चण्डी, श्रीमद्देवीभागवत र अन्य देवी स्तोत्रकोकसमेत पाठ गरिन्छ ।
दसैँ पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
मार्कण्डेय पुराणमा पनि नवरात्रको विषयमा चर्चा गरिएको छ । नवरात्रको नौ दिनसम्म आफ्नो मनोकांक्षा पूर्तिका लागि कुन दिन कुन देवीकोे पूजा गर्ने भन्नेबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।